डा. बाबुराम भट्टराईलाई भएको के हो, सम्भव छैन र नेपालमै उपचार?
यज्ञराज जाेशी काठमाडौं - सोमबार, फागुन १०, २०७७
उपचारका क्रममा दिल्ली पुगेका भट्टराई नेपाली दूतावासमा।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई उपचारका लागि आइतबार भारत पुगेका छन्।
न्यूरो इन्डोक्राइनको ट्युमरको आशंकामा उनी उपचारका लागि भारत गएका हुन्। दिल्लीमा उनको उपचार इन्स्टिच्युट अफ लिभर एण्ड बिलिअरी साइन्सेसमा हुनेछ। पेटमा समस्या देखिएपछि उनी लामो समयदेखि काठमाडौंको निदान अस्पतालमा उपचार गराउँदै आएका थिए।
न्यूरो इन्डोक्राइन आन्द्रामा हुने सानो ‘एवनर्मल टिस्यु’ जस्तो हो। यो भनेको आन्द्रामा हुने भिन्नै खालको मासु हो। जो ‘ट्युमर’ जस्तो देखिन्छ। त्यसलाई सतप्रतिशत क्यान्सर हो भन्न मिल्दैन। तर, यसले क्यान्सरका लागि जोखिम भने बढाउने गर्छ।
डा. भट्टराईका स्वास्थ्य चिकित्सक डा. ज्ञानेन्द्र शाहकाअनुसार उनको शरीरमा अहिले नै ठूलो जोखिम नदेखिएपनि पछि जोखिम हुनसक्ने भएकाले डा. भट्टराईलाई थप उपचारका लागि भारत पठाइएको हो।
‘म रोगको विशेषज्ञ चाहिँ होइन। पूर्वप्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य सल्लाह दिने चिकित्सक भएकाले मैले नेपालका चिकित्सक डा.अजित खनाल, निदान अस्पतालका डाक्टरहरू डा. लोचन कार्कीहरूसँग छलफल गरेको थिएँ', डा. शाहले भने, ‘भारतमा गएर क्लोनोस्कोपी वा इन्डोस्कोपी गर्दा इन्सिडियोस फाइन्डआउट होला भन्ने हामीले आशा गरेका छौं।'
के हो न्यूरो इन्डोक्राइन?
वीर अस्पतालका वरिष्ठ न्यूरो विशेषज्ञ डा. राजिव झा यो ट्युमर एकदमै ‘रेयर’ भएको बताउँछन्।
‘नामै न्यूरो र इन्डोक्राइन। नर्मल न्यूरो भनेको नसा भयो र इन्डोक्राइन भनेको हाम्रो शरीरमा जतिपनि हार्मोन छन् त्यसलाई व्यालेन्स गर्ने सिस्टम’, उनी भन्छन्, ‘यी दुई ओटै सेलहरू मिलेर असामान्य ट्युमर हुन्छ। दुबै ट्युमरमा नसा पनि हुन्छ। इन्डोक्राइन सेल्स भन्ने पनि हुन्छ।’
त्यसैले यो ट्युमर मासुको डल्लोजस्तो पनि हुने र यसले शरीरका हार्मोन बढी फैलाउने उनी बताउँछन्। ट्युमरमा धेरै किसिमका हार्मोन आउने र त्यसले गर्दा मानिसमा अचम्मका लक्षण देखिने डा. झा बताउँछन्।
‘कतै केही देखिँदैन। मानिस थाक्न थाल्छ। डायरिया हुन्छ। पसिना आउँछ। मानिस थाक्न थाल्छ। शरीर एकदमै कमजोर हुन्छ। शरीर सुक्दै जान्छ’, उनी भन्छन्, ‘धेरै कुराको जाँचपछि पत्ता लाग्छ यो ट्युमर।’ यो क्यान्सर शरीरको जुनसुकै भागमा पनि लाग्न सक्ने उनी बताउँछन्।
यो क्यान्सर फोक्सो, पाचन ग्रन्थी, दिसा गर्ने ठाउँ, आन्द्रालगायत जुनसुकै भागमा हुनसक्ने डा. झा बताउँछन्। यसको लागि हर्मोन जाँचदेखि अरु जाँच पनि गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
छातिमा भए छातिको सिम्टम्स, पेटमा भए डायरिया, सुक्ने, खान मन नलाग्नेजस्ता समस्या हुन्छन्। पाचन ग्रन्थीमा भए खानै नपच्ने हुन्छ। ट्युमरको प्रकारअनुसार उपचार हुने चिकित्सकको भनाइ छ।
नेपालमा यसको उपचार सम्भव छ?
नेपालमा थुप्रै क्यान्सरको उपचार सम्भव छ। तर, यो क्यान्सरको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ।
बाबुराम भट्टराइले ट्विट गर्दै नेपालमा २१ औं शताब्दीमा शरीरको कुनामा पलाएको ट्युमर सामान्य कि घातक पत्ता नलाग्नु दुखद् भएको बताएका छन्। उनले लेखेका छन्, ‘मेरो स्वास्थ्यलाभको कामना गर्नुहुने सबै साथीहरू अहिले दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको अतिथिकक्षमा बसेर घोत्लिँदै गर्दा अत्यन्त लज्जित/दुखित छु। २१ औं शताब्दीमा शरीरको कुनामा पलाएको ट्युमर सामान्य कि घातक हो छुट्याउन नसकेर विदेशमा छु। सामान्य नागरिकको के होला?’
तर, बरिष्ठ न्यूरो सर्जन डा. झा नेपालमै उपचार सम्भव हुने बताउँछन्। ‘मेडिकल साइन्सको कुरा गर्दा नेपालमा धेरै रोगको उपचार सम्भव छ। नेपालभन्दा बाहिरी देशमा पोस्टअप केयर राम्रो छ। टेक्नोलोजि राम्रो छ। दक्ष जनशक्ति बढी छ’, उनी भन्छन्, ‘पर्याप्त जनशक्ति हुँदा सानो-सानो कुराको केयर गर्न सकिन्छ।
उनी वीर अस्पतालमै यो ट्युमरको उपचार सम्भव हुने दाबी गर्छन्। जहाँपनि यो ट्युमरको उपचार एकै प्रकारको भएको उनको भनाइ छ। सुरुवाती स्टेजमा भए यसको उपचार सहज हुने र गम्भीर अवस्थामा पुगे उपचार गाह्रो हुने उनले बताए।